Home Somali News Somaliland: Wasiir Xirsi Oo Bayaamiyay 56 Km oo Jid Laami ah Oo...
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta xadhiga ka jaray dhismaha 56km oo laami ah oo ku kala yaalla jidka isku xidhay Xamaas Illaa Burco, taasi oo laga maal-geliyay sanduuqa horumarinta Somaliland.
Wefti uu hogaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamud “Siilaanyo” isla markaana aan ku wehelinayeen tiro ka mida Golihiisa Wasiirrada ayaa safar shaqo oo kormeer iyo xadhig ka jarida mashaariic horumarineed oo Waddooyinku ugu muhiimsan yihiin ah ugu baxay bariga dalka.
Wasiirka madaxtooyadda Xirsi Cali Xaaji Xasan, oo wasaaradiisa ay hoos timaado wakaaladda horumarinta waddooyinka, ayaa tafaasiil ka bixiyay dhismaha wadooyinkan oo madaxweynuhu maanta furay.
Wuxuu dhismaha waddooyinkaas ku soo bandhigay mareegtiisa Intertnet-ka ee guusha.com.waxaanu ku yidhi “Hadaba, dib u dhiska iyo dayactirka laga wado waddada isku xidha Hargeysa-Berbera-Burco-Sheekh ayaa u kala qabsoontay sidan hoos ku xusan:
Xamaas – Berbera = 36km xidhiidh ah oo dhamaaday
Berbera – Sheekh = 20 Km “Intii kalena gacanta lagu hayo”
Isku gayn waxa ilaa hadda qabsoomay 56Km oo kamida 70km oo horay looga dhagax dhigay Sanduuqa Horumarinta Somaliland qaybtiisa Waddooyinka “SDF” taasi oo muftaaxeedu ahaa kadib markii wakaaladda horumarinta waddooyinka oo hoos timaada Madaxtooyada Somaliland ay ku dhiiratay bilowga dayactirka jidka isku xidha Caasimada iyo Marsada dalka.”
Waxaa sidoo kale Bushaaro ah in aan haysano balan qaadka dhismaha iyo dayactirka jidka isku xidhi doonaa Sheekh – Laasacaanood iyo sidoo kale dhismaha 6 Bridge oo loo qaybin doono dhammaan dooxyada dalka sida ay u kala baahida badan yihiin,”ayuu sharaxay Wasiirku.
Waxqabadkan waxa Wasiirka Madaxtooyaddu iishaaray inay ku timid markii ay soo bandhigeen hufnaan maamul “Tallaabooyinkan oo ay xukuumadu gadhawadeen ka tahay iyadoo caawin ka helaysa sanduuqa horumarinta Somaliland ayaa imanaya kadib markii hufnaan shaqo iyo dhiiranaan maamul laga arkay xukuumada Somaliland oo kaashanaysa shacabkeeda horumarka u heelan.”
Waxaa hubaal ah in dhismaha waddooyinku kaalin weyn ka qaataan kor u qaadida ganacsiga, adkaynta amaanka, iyo abuuritaanka fursado shaqo,”ayuu daboolka ka qaaday Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Wasiirku waxa uu soo qadimay inay lacagtii ay lacaftii loogu tallo-galay dhismaha waddooyinkan ay madhxiyeen, “Waxaa xusid mudan in lacagtii loogu tallo galay dhismaha 56-ka km ee illaa hadda qabsoomay aan badbaadinay “Save” ku dhawaad 2 million oo doolarka maraykanka ah taasi oo ku timid khibrada ay wakaaladda horumarinta waddooyinka oo hoos timaada Madaxtooyada Jamhuuriyada Somaliland u leedahay dhismaha waddooyinka iyo tashiilka maamulka gacanta ku haya.”
“Iyadoo aan marnaba laga tanaasulayn tayada raandhiiska leh waa astaan wanaagsan oo soo jiiidatay cid walba oo xiisaynaysa in ay wax inala qabato,”ayuu ummadda ugu qalbi qaboojiyay Wasiirka Madaxtooyaddu.
Waxa uu hadalkiisa ku soo gunaanaday amaan uu u jeediyay shacbiga dalkan. “Shacabka reer Somaliland waa cudud caafimaad qabta isla markaana uu hogaaminayo caqli cilmi badan kaashanaya.Wa Bilaahi Tawfiiq.”
Somaliland: Axmed Yuusuf Yaasiin Oo Ka Hadlay Mushkiladaha Ka Dhalan Kara Saldhiga Imaaraadka Laga Siinayo Berbera
Deg Deg: Fanaaninta Hodan Cabdiraxmaan Iyo Yurub Geenyo Oo Lagu Soo Celiyey Kooxda Xidigaha Geeska Balse Yaa Guddoomiye Ka Noqon Doona